အိမ်အလှဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင်အလင်းရွေးချယ်မှုသည်အလွန်အရေးကြီးသောအချိတ်အဆက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ယနေ့ခေတ်အလှဆင်ခြင်းစျေးကွက်တွင်ပင်မမီးလုံးကိုမီးအိမ်များနှင့်မျက်နှာကျက်မီးသီးနှစ်မျိုးခွဲခြားနိုင်သည်။ ဤအလင်းနှစ်မျိုးသည်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာများရှိသည်။
တစ် ဦး chandelier ရွေးချယ်ဖို့ဘယ်လို
Chandelier များကို living ည့်ခန်း၊ ထမင်းစားခန်းသို့မဟုတ်အိမ်တွင်အိပ်ခန်းများတွင်သုံးလေ့ရှိသည်။ Chandeliers များသည်အလွန်အဆင်တန်ဆာများဖြစ်သော်လည်းမည်သည့် chandelier အမျိုးအစားများရှိပါသနည်း။ Chandelier ကိုဘယ်လိုရွေးရမလဲ။ Chandelier ကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း။ နောက်ပြီးဒါကိုကျွန်တော်သိအောင်လုပ်ပါ။ 01 Chandelier အမျိုးအစားများရေကြောင်းပြည့်သော chandeliers ...
ခြားနားချက်အရောင်အပူချိန်ကွဲပြားခြားနားသောလေထုဖန်တီးပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ နွေးသောအရောင်များသည်နွေးထွေးသောရင်ခုန်စရာနှင့်သက်သောင့်သက်သာရှိသောပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖန်တီးပေးနိုင်ပြီးအေးမြသောအရောင်များသည်ပုံကိုအအေးနှင့်လူဆိတ်ညံရာအဖြစ်ထင်မြင်စေနိုင်သည်။ ကွဲပြားခြားနားသောအရောင်အပူချိန်ကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ ： ကျွန်ုပ်တို့သည်အရောင်များကိုယေဘုယျအားဖြင့်ခွဲဝေသည်။
၂ မီတာအိပ်ရာ၏ ဦး ခေါင်းတွင်တပ်ဆင်ထားသောနံရံမီးခွက်၏အရွယ်အစားမှာအဘယ်နည်း။
၁။ အိပ်ရာနံရံမီးခွက်သည်အောက်ခြေမှမြေပြင်မှ ၁.၅ မှ ၁.၈ မီတာအကွာအဝေးတွင်ရှိသင့်သည်။ အကယ်၍ wall-type bedside wall lamp ထွက်သွားပါကနံရံနှင့်ဘေးဘက် wall lamp အကြား 10cm မှ 40cm ရှိသင့်သည်။ အိပ်ရာအမြင့် 45 စင်တီမီတာဖြစ်လျှင်, အပေါင်းမွေ့ရာ၏အမြင့် rea နိုင်ပါတယ်လျှင် ...
အိမ်ကိုစင်္ကြံဖြင့်အလှဆင်နိုင်ပုံနေရာလွတ်သည်၊ မီးခွက်များကိုမရွေးထား၊ ကိုက်ညီမှုငါးမျိုးသည်နွေးထွေးပြီးတောက်ပသည်။
အကယ်၍ စင်္ကြံတွင်အလင်းအလုံအလောက်မရှိပါကနေရာသည်အလွန်မှိန်သွားလိမ့်မည်။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာဆက်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်လူတွေကိုစိတ်ဓာတ်ကျစေပြီးကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုခံစားရလိမ့်မယ်။ အိမ်ကိုစင်္ကြံတစ်လုံးနဲ့ဘယ်လိုအလှဆင်မလဲ။ အလင်းရောင်မှိန်နေသောစင်္ကြံနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်တွင် spa ပြုလုပ်ရန်အလင်းရောင် ၅ မျိုးကိုအကြံပြုပါသည်။
သင်၏အိမ်အတွက်အကောင်းဆုံးဟုသင်ထင်သော five ည့်ခန်းမီးပွားများငါးခု၏စာရင်း
lay ည့်ခန်းသည်မိသားစုပုံစံ၏အလွန်အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မိသားစုအပန်းဖြေရန်နှင့်ဖျော်ဖြေရေးအတွက်နေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီး guests ည့်သည်များကိုဖျော်ဖြေရန်အတွက်အဓိကနေရာလည်းဖြစ်သည်။ ကောင်းမွန်သောအလှဆင်ခြင်းသည် guests ည့်သည်များကိုအလွန်စွဲမှတ်စေပြီးလူများကိုသူတို့ကိုချီးမွမ်းစေနိုင်သည်။
သူငယ်ချင်းများစွာသည် ၆၀ နှင့် ၇၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအတွင်းရှိချမ်းသာကြွယ်ဝသောမိသားစုများတွင်မကြာခဏတွေ့မြင်ခဲ့ရသောတီဗွီမှကြမ်းခင်းမီးခွက်များအကြောင်းလေ့လာသင်ယူနိုင်သည်။ သို့သော်ခေတ်သစ်ကြမ်းခင်းမီးခွက်များသည်များသောအားဖြင့်ကွင်းများ၊ မီးခွက်များနှင့်အလင်းအရင်းအမြစ်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပြီးနေရာတစ်ခုကိုယူပြီးခေတ်နောက်ကျနေသောကြောင့်လူအများစုကယင်းကိုမရွေးချယ်ကြပါ။ သင်ဤဆောင်းပါးကိုဖတ်လျှင် ...
chandelier နှင့်မ chandelier အကြားခြားနားချက်ရှိပါသည်, ပြောင်းလဲမှုကယ့်ကိုကြီးလှ၏!
အချိန်ကောင်းများတိုးတက်နေပြီးမီးအိမ်နှင့်မီးအိမ်လည်းကွဲပြားခြားနားစွာပေါ်ထွက်လာနေသည်။ Chandelier သည်ဂန္ထဝင်စတိုင်လ်ဖြစ်သော်လည်းဒီဇိုင်းဆွဲမှုများပိုမိုများပြားလာသော်လည်းအဓိကမီးအိမ်၏ဒီဇိုင်းသည်အဓိကကျသောအရာဖြစ်သည်။ ဒီနေ့ chandelier နှင့် no c တို့၏ခြားနားချက်ကိုပြောကြပါစို့။
ရိုးရှင်းသောအိမ်သုံးပရိဘောဂများထုတ်လုပ်မှုနှင့်အတူကြမ်းခင်းမီးခွက်များ၏ပုံစံများနှင့်ပုံစံများသည်ပိုမိုစုံလင်လာပြီးသူတို့၏လုပ်ငန်းဆောင်တာများသည်လည်းဆန်းသစ်တီထွင်မှုများစွာကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ ဒီဇိုင်းအရ၊ ကြမ်းခင်းဆီမီးခွက်သည် Nordic စတိုင်နှင့်သက်ဆိုင်သည်၊ ရိုးရှင်းသောအစင်းဒီဇိုင်းနှင့်ကွေးသောဒီဇိုင်းနှင့်အတူ ...
Chandelier အဟောင်းသည်ခေတ်နောက်ကျနေပြီးအဓိကမီးခွက်၏ဒီဇိုင်းသည်လူကြိုက်များ။ ခေတ်မီနေသည်။
လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကအလှဆင်ထားခြင်းကိုကျွန်တော်မှတ်မိနေဆဲဖြစ်သည်။ living ည့်ခန်းရှိမီးခွက်များသည်ကြီးမားသောသံထည်မီးခွက်များသို့မဟုတ်မျက်နှာကျက်မီးလုံးများဖြစ်သော်လည်းယခုသင်သည်၎င်းတို့ကိုအလှဆင်ခြင်းတွင်တွေ့လိမ့်မည်။ လူအများစုကအဓိကအလင်းကိုစွန့်လွှတ်လိုက်ကြပြီးအဓိကအလင်းသည်လမ်းကြောင်းသစ်တစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ၁။ ပင်မလိုင်း၏ထူးခြားချက်များကားအဘယ်နည်း။
ကြီးမားသော Chandelier များကိုမတပ်ဆင်ပါနှင့်၊ ဤမီးများသည်ယခုနှစ်တွင်လူကြိုက်များပါသည်။ လာကြည့်ပါ ~
၁။ Ceiling light မျက်နှာကျက်မီးလုံးသည် chandelier နှင့်အနည်းငယ်ဆင်တူသည်။ သို့သော်ဆွဲထားသည့်လုပ်ငန်းစဉ်မရှိပါ။ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျဤကဲ့သို့သော, ဂျပန်, Nordic နှင့်ရိုးရှင်းသောအလှဆင်စတိုင်များအတွက်အလွန်သင့်လျော်သည်။ 2. Downlight Downlight များကိုအများအားဖြင့်အပန်းဖြေနေရာများတွင်အသုံးပြုကြသည်။
လူ့ဗဟိုပြုအလင်းရောင်နှင့် ပတ်သက်၍ သင်သိထားရန်လိုအပ်သည့်အချက်မှာ Mr Andreas Schulz သည်ဗိသုကာဆိုင်ရာအလင်းရောင်စီမံကိန်းများစွာကိုကျွန်ုပ်တို့အားဝေမျှပြီးလူသားဆိုင်ရာအလင်းရောင်သည်နေရာတကာဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြခဲ့ပြီးအလင်းမှတစ်ဆင့်လူ့စိတ်ခံစားမှုများအပေါ်အရေးကြီးသောသြဇာသက်ရောက်စေသည်။ အတွေ့အကြုံများသောအလင်းရောင်ထုတ်လုပ်သူနှင့်တင်ပို့သူအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် ...
အလှဆင်မီးများသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောဒီဇိုင်းရှိသည်။ Optical quality ကိုအပြီးသတ်လိုက်စားသည့်စီးပွားဖြစ်အလင်းရောင်နှင့်မတူဘဲအလှဆင်မီး၏ဒီဇိုင်းသည်မီးခွက်ပုံသဏ္ဌာန်၏အလှအပသာမကအလင်းရောင်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပါအလေးပေးသည်။ ကွဲပြားခြားနားသောလျှောက်ထား ...
Chandelier ကိုဘယ်လိုရွေးရမလဲ။ ဒီဇိုင်နာများသည်ပိုင်ရှင်များအားမည်သို့အကြံပြုသင့်သနည်း။
မီးပွိုင့်များအတွင်းရှိမျက်နှာကျက်များတွင်တပ်ဆင်ထားသည့်လူကြိုက်များသည့်အလှဆင်မီးများကဲ့သို့ Chandelier များသည်အပျော့စားနှင့်ခိုင်မာသောအလှဆင်မှုများကြောင့်ကြီးမားသောနှင့်အထပ်မြင့်အိမ်တွင်းနေရာများ (ဟိုတယ်များ၊ ပွဲခန်းမကြီးများ) နှင့်အိမ်နေရာများတွင်လူကြိုက်များသည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာအဓိကမီးအိမ်၏ထောက်ခံအားပေးမှုသည် ...